အကျိတ်နှင့် psyche: စိတ်ခံစားမှု "ဖော်ပြ" ၏အရေးပါမှုကို• musanews
ပင်မစာမျက်နှာ ပထမ ဦး ဆုံးသတင်း Psyche & seduction အကျိတ်နှင့် psyche: စိတ်ခံစားမှု "ဖော်ပြ" ၏အရေးပါမှုကို
တခါတရံတွင်clichésများထဲသို့ ၀ င်ရောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားရာတွင်“ စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြခြင်းသည်အရေးကြီးသည်” ဟုသာမန်အသိဖြင့်ဝေမျှထားသောအယူအဆကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပုံရသည်။ မည်သည့်စိတ်ပညာရှင်မဆိုဤဖော်ပြချက်နှင့်ကဏ္ to နှင့်မနီးစပ်သောသူများနှင့်လည်းသဘောတူလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ် - ခန္ဓာကိုယ်၏ဆက်နွယ်မှုအကြောင်းပြောဆိုကြပြီး၊ အတွေးနှင့်ဆေးပညာ၏သမိုင်းသည်ယခုအခါတစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနေနှင့်မည်မျှအခွင့်ထူးပေးသည်ကိုလျစ်လျူရှုပါက၊ ပေါင်းစည်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တိုတိုပြောရရင်: psyche နှင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်သည်.
ဘယ်လိုလဲ? စိတ်ကို - ခန္ဓာကိုယ်ဆက်ဆံရေးကနေအာရုံသို့ပြောင်းလဲ အကျိတ်ရောဂါဗေဒ.
ဤတွင်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏အကိုင်းအခက်နှစ်ခုကစားသို့ရောက်ကြ၏: စိတ်ရောဂါ နှင့် စိတ်ပညာကင်ဆာ.
ပထမတစ်ခုမှာအချို့သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးလက္ခဏာများကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများအထူးသဖြင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါနှင့်ကင်ဆာရောဂါများဖြစ်ပေါ်စေရန်အထောက်အကူပြုစေသောထိုယန္တရားများကိုဖော်ထုတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယစိတ်ပညာနှင့်ကင်ဆာပညာရပ်အကြားတွေ့ကြုံမှု၊ အတိအကျစိတ်ပညာဆိုင်ရာကင်ဆာပညာ၊ ကင်ဆာ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်မှတစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်ချဉ်းကပ်နည်း။
၎င်းဒြပ်စင်နှစ်ခုကိုပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြရန်မှာရှေးဂရိမှဆရာဝန် Pergamum of Galen ဖြစ်သည်။ သူသည် psyche နှင့်အကျိတ်များအကြားနိမ့်ဆုံးဘုံပိုင်းခြေရှိကြောင်းနှင့်ထိုအချိန်ကတည်းကအဆုံးစွန်သံ၏လေသံနှင့်ဆက်စပ်နေခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုသူယုံကြည်ခဲ့သည်။ စိတ်ဓာတ်နှင့်အားနည်းကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်။
Galen လက်ထက် မှစ၍ များစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်းသူ၏အခြေခံယူဆချက်မှာမပြောင်းလဲသေးဘဲအတည်ပြုချက်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်သည် C အမျိုးအစား (ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး).
Il C အမျိုးအစား လိုက်နာမှု၊ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်မှု၊ အတည်ပြုမှုအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှုဖိနှိပ်ဖို့သဘောထားကို အမျက်ဒေါသနှင့်ရန်လိုကဲ့သို့။
လက်တွေ့လေ့လာမှုများကဤဘာသာရပ်များ၏အသက်တာသည်ရောဂါမဖြစ်ပွားမီ ၂ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အတွင်းသိသိသာသာစိတ်ထိခိုက်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်များရှိနေခြင်းအားဖြင့်မည်သို့ထင်ရှားကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ မကြာခဏကြုံတွေ့ခဲ့ကြပြီ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးရှုံးမှု အထူးသဖြင့်ရင်သားကင်ဆာ၊ သားအိမ်နှင့်အဆုတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုများတွင်ထိုသူသည်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်လက္ခဏာများ၊ ဘဝဖြစ်ရပ်များနှင့်အဓိကအားဖြင့်စိတ်ခံစားမှုများကိုဖိနှိပ်လိုသည့်ဆန္ဒကြောင့်ရောဂါကိုပိုမိုလွယ်ကူစွာထိခိုက်နိုင်သည်။
မေးခွန်းကနည်းပညာပိုင်းအရထင်ရကောင်းထင်ရလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်စာဖတ်သူကိုငါသိစေချင်တာကဒီယန္တရားရဲ့အရေးပါမှုကတော့စိတ်လှုပ်ရှားမှု တားစီးသို့မဟုတ်ဖိနှိပ်အမျိုးအစား C ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး၏ပုံမှန်, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်ရှင်းပြခံရမ က somatic လမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ဆေးရုံကဆင်းတိကျသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု (သို့) ခုခံအားကျဆင်းမှုတုန့်ပြန်မှု (ရောဂါပိုမိုဆိုးရွားလွယ်ခြင်း) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်
"ဘာလို့ငါ့ကိုဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ" ကင်ဆာလူနာသည်အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားလျှင်၊ သူသည်ယခုအချိန်ထိမသိရသေးသောပြissuesနာများနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ငါဘဝ, နာကျင်မှု, သေခြင်း၏ themes များပြောပါ။ ဘာသာရပ်သူ့ကိုယ်သူကြုံတွေ့တွေ့ကြောင်းခံစားချက်တွေကိုအများကြီးရှိ; အခြေအနေကိုငြင်းပယ်ခြင်း၊ မယုံခြင်း၊ ဒေါသထွက်ခြင်း၊ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းနှင့်လက်တွေ့မကျခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းများကိုစဉ်းစားသောအလွန်ပြင်းထန်သောခံစားချက်များဖြစ်သည်။ လူထောင်ပေါင်းများစွာ၏စိတ်ထဲတွင်မေးခွန်းပေါင်းများစွာကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးဆရာဝန်များပင်လျှင်မည်သို့ဖြေဆိုရမည်ကိုမသိကြပါ။ ငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲ - အခုဘာဖြစ်သွားမလဲ။ - ငါသေလိမ့်မယ်? - ငါရောဂါနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မည်နည်း
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအမျိုးအစား C ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစိတ်ထဲ ထား၍ စာဖတ်သူ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကျွန်ုပ်ထပ်မံတင်ပြသည်ပြင်ပ၎င်းသည်ကင်ဆာလူနာအားသူ၏စိတ်ခံစားမှုကိုဖော်ပြရန်နှင့်ပြောဆိုရန်အားပေးခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်သူယခင်ကလေ့လာဖူးခြင်းမရှိသောအရာများကိုလုပ်ရန်သင်ကြားပေးခြင်းနှင့်၎င်းသည်ပြတ်ပြတ်သားသားဆုံးဖြတ်ချက်ရာခိုင်နှုန်းဖြင့်ရောဂါအခြေအနေကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြင်ပမှ ၀ င်ရောက်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းသည်ဤဆိုးသွမ်းမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်အကြောင်းတရားဖြစ်သည်ဟူသောသတင်းစကားကိုကျွန်ုပ်သိရှိရန်ဝေးဝေးရှောင်ပါ။ ဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစာဖတ်သူကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်သာဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အချိန်သည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှသောအချက်နှစ်ချက်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
psychosomatics ၏သမိုင်းကခန္ဓာကိုယ်သည်ငါတို့ရရှိနိုင်သောနောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးအခြားနည်းဖြင့်ဖော်ပြခြင်းမရှိသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ ခန္ဓာကိုယ်သည် psyche ၏အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသောဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်သောအကြောင်းအရာများကိုနောက်ဆုံးအရာအဖြစ်ယူမှတ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏လူ့အဖွဲ့အစည်းက၎င်းအတွက်အရံသိုထားရှိသည်ဟုအချို့သောသဘောမျိုးဖြင့်တရားမျှတနိုင်မည်ဆိုသည့်အာရုံကို (တခါတရံစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေ၊ ငါတို့ရဲ့ psyche ကိုတူညီတဲ့ဂရုစိုက်ဖို့တန်းတူပညာမသင်နိုင်အောင် အထူးသဖြင့်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာကိုပိုမိုရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည့်သမိုင်းဝင်ကာလအတွင်း၊
ယခင်ဆောင်းပါးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Entropy: သင်၏တည်ငြိမ်မှုသည်သင်မည်မျှသည်းခံနိုင်မှုအပေါ်မူတည်သည်
နောက်ဆောင်းပါးကာတာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊
ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ဝိရောဓိသည်သင်၏ဘ ၀ ကိုပြောင်းလဲရန်အကြောင်းပြချက်ကိုရှာဖွေသည်
အာဏာရှင်ဆန်သောဇာတ်ကြောင်းများအတွက်ဖြေဆေးအဖြစ်သံသယ ၀ င်သည်
လင်းပိုင်အကြောင်းအိပ်မက် - အဓိပ္ပာယ်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူ
Coronavirus စိတ်ပညာ။ ကူးစက်ပြန့်ပွားမှုကိုဘယ်လိုစီမံရမယ်ဆိုတာ